ज्योतिषीय दृष्टिमा नयाँ वर्ष २०७६ः देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिन्छ, जनआक्रोश बढ्छ! – जागरण अनलाइन
ज्योतिषीय दृष्टिमा नयाँ वर्ष २०७६ः देश विषम परिस्थितिबाट गुज्रिन्छ, जनआक्रोश बढ्छ!
२०७५ चैत्र ३०, शनिबार १०:०६ मा प्रकाशित
युवा ज्योतिष मुस्कान खनाल बैशाख १
युवा ज्योतिष मुस्कान खनाल
माघपछि सरकार परिवर्तन हुने, राजनेताहरुमा तनाव र आन्दोलनका घटना साथै इन्धनको मूल्यमा वृद्धि हुनेछ। नेपालका लागि ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्र, मार्ग र चैत महिना प्रतिकूल रहनेछ।
आर्य संस्कृतिमा ज्योतिषीय आधारमा चैत महिनाको शुक्लपक्षको प्रतिपदा तिथिको दिनदेखि नयाँ संवत्सरको प्रारम्भ हुने गर्छ।
यसैअनुसार संवत् २०७६ साल परिधावि नामक संवत्सरको वर्ष परेको छ। संवत्सरहरुमध्ये परिधावि ४६औं क्रममा पर्छ।
जुन यस वर्षको ग्रह परिषद्को राजा शनि, मन्त्री सूर्य, सस्येश बुध, धान्येश चन्द्र, मेघेश शनि, रसेश शुक्र, निरसेश बुध, फलेश शनि, धनेश भौम, दुर्गेश शनिले वर्ष सञ्चालनको अभिभारा पाएका छन्। परिधावि नामक संवत्सर पर्नु, १० सदस्यीय ग्रह परिषद्मा ४ शुभ र ६ अशुभ ग्रहको नेतृत्व रहनुका साथै राजा र मन्त्री पनि पापप्रभावी भएकाले अधिकांश क्षेत्रमा देश अत्यन्तै विषम परिस्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने देखिन्छ।
आकाशीय प्रशासनिक एकाइकामा अधिकतम विषयहरुको सञ्चालनको दायित्व विषम ग्रहहरुको हातमा भएकाले विषम राजनैतिक र सामाजिक परिस्थितिका कारण आम जनताले अन्याय र अवरोधको सामना गर्नुपर्छ। त्यस्तै जनता एवं सत्ता र प्रशासनमा बस्नेहरुका बीचमा वैमनश्यता, गम्भीर वैचारिक मतभेद, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका बीचमा वैचारिक विरोधाभासको परिस्थिति सिर्जना हुने संकेत छ।
यो वर्ष पहाडमा अतिवृष्टि र तराई मधेशमा वर्षाको कमी हुनाले जनता चिन्तित हुनेछन्। राजा र मन्त्री गृह परस्परविरोधी भएकाले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच तालमेलमा कमी रहनेछ। यसको असर प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा समेत पर्नेछ। ग्रहपरिषद्का राजा र मन्त्री परस्पर शत्रु ग्रह परेकाले विकास निर्माणका काममा केन्द्र प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग विवादहरु बढ्नेछन्।
मन्त्री सूर्य भएकाले कडा नीतिनियमहरु बन्नाले जनता आन्दोलित हुनेछन्। जगल्लग्नको मालिक र दशमेश बुध निचो हुनका साथै सूर्य आठौँ भएकाले सरकारी कामकारबाहीमा विपक्षबाट बाधा पर्नेछ। जगतलग्नको दशौमा राहु भएकाले सरकारले कुटिलताको बढी प्रयोग गर्नेछ।
जगतलग्नको लाभमा चन्द्रमा भएकाले सरकारी कोष वृद्धि हुने भए पनि धनस्थानको मालिक शुक्र षष्ठमा भएकाले ऋणभार बढ्ने र राज्यकोषको दुरुपयोगमा वृद्धि हुँदै जानेछ।
पञ्चमेश र गुरुको युति भएकाले शैक्षिक, बौद्धिक र सामाजिक सुधारमा प्रगति हुनाले जनता उत्साहित हुनेछन्। राजा र मन्त्रीको कार्यभार पापग्रहले पाएकाले सरकारी कामकाजमा ढिलासुस्ती र कालाबजारी घुसखोरी नियन्त्रणको प्रयास विफल पार्न गिरोहहरु पूर्ववत् सक्रिय हुनेछन्। जगल्लग्नको मालिक सातौँमा भएकाले व्यापार नीतिमा सुधार हुनेछ। बाह्रौँको मालिक सूर्य उच्च भएकाले विदेश नीति परिवर्तन हुनेछ।
सरकार सञ्चालकहरु स्वेच्छाचारी र प्रतिपक्षको असहयोगले जनतामा खिन्नता रहनेछ। सस्येश, बुध र धान्येश चन्द्र भएकाले वर्षेवाली उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ ता पनि हिउँदेवालीको उत्पादन घट्नेछ। रसेश शुक्र भएकाले दुग्धादि रस पदार्थ उत्पादनमा केही कमी हुनेछ।
धनेश मंगल दशममा भएकोले करसंकलनमा कडाइ हुनेछ। ग्रहपरिषद्मा ६ अशुभ प्रभावमा भएकाले सरकारीविरोधीहरु सक्रिय हुनेछन्। वर्षको राजा जगल्लग्नमा केन्द्रमा, दशमेश निच र जगल्लग्नको संसदको स्थानको मालिक स्वक्षेत्री, तृतीयेश भाग्यमा भएकोले सरकार र संसद बीचमा टकरावका स्थितिहरु आइरहनेछन्। यसमा सांसदहरुले असहयोग गर्नाले सरकारी योजनामा बाधा पर्नेछ।
लग्नेश दशमेश दुवै निचो भएकाले केन्द्र प्रदेश सरकार विरोधमा स्थानीय सरकार रहनाले जनताका नियमित कार्यहरु प्रभावित हुनेछ। जगल्लग्नमा गुरु बलियो भएकाले शैक्षिक, बौद्धिक क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ। षष्टेश शनि चतुर्थमा अष्टमेश दृष्टि भएकाले सेना प्रहरीको मनोबल बढ्ने नीतिनियम बन्नेछन्। शुक्र चन्द्रको प्रभावले सञ्चार, प्रविधि, वैदेशिक श्रम, स्वास्थ्य, बीमा क्षेत्रमा उन्नति हुनेछ। चतुर्थेश बलियो भएकाले चतुर्थमा विकास निर्माण पुनर्निर्माणले गति लिनेछ।
सरकारी खर्चमा वृद्धि हुनेछ। अष्टम सूर्य भएकाले सरकारको आलोचना कायमै रहने छ। न्याय क्षेत्र र सैन्य खर्चमा वृद्धि हुनेछ।
धनेश षष्ठमा भएकाले सरकारको अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नेछ। दशमा पाप ग्रह भएकाले सरकारका महत्वाकांक्षी योजनाहरु आउनेछन् तर आर्थिक क्षेत्रमा गरेका कार्यहरु असफल हुनाले सरकारी कोषको दुरुपयोग कायमै रहनेछ। बुध निचो हुनाले व्यापारिक वर्ग, औद्योगिक वर्ग पीडित हुनेछन्। ता पनि तृतीयेश भाग्यमा उच्च भएकाले औद्योगिक नीतिमा सामान्य सुधार हुनेछ।
यस वर्षमा कृषि उत्पादक वृद्धि, शैक्षिक र प्राविधिक क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता वृद्धि हुनेछ। प्रविधि र सञ्चार, कला साहित्य, श्रमिक, वृद्धवृद्धाका हितमा नियम कानुन आउनेछन्। विद्यार्थी वर्गको शैक्षिक अवस्था सुधार हुनेछ तर गुरु, केतु र शनि साथै भएकाले विद्यार्थी आन्दोलित हुनेछन्। चतुर्थमा शनि र केतुको साथ र सूर्य अष्टममा भएकाले ठूला दुर्घटना र दैवी विपत्तिमा वृद्धि हुनेछ भने राज्यका विशिष्ट व्यक्तिहरुको असामयिक निधन हुनेछ।
सप्तमेश चतुर्थ भएकाले वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीका क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ। षष्ठेशभन्दा चतुर्थेश बलियो हुनाले प्रशासनिक क्षेत्रमा कडा नीति नियम आउनेछन्। धनको मालिक षष्ठ र गुरु केन्द्रमा हुनाले देशको आर्थिक स्थिति तथा सेयरबजारमा केही सुधार हुँदै जानेछ। तर, कर भार थपिनेछ। एकादशेश एकादश बलियो भएकाले संसदका गतिविधिमा सुधार हुनेछ।
जगल्लग्नमा मंगल र शनिको नवपञ्चक योगले हडताल, द्वन्द्व, हत्या, हिंसा कायमै रहनेछ र जनधनको क्षति हुनेछ। जगल्लग्नमा प्रायः सबै ग्रह केन्द्र र त्रिकोण स्थानमा भएकाले विश्वका लागि वर्ष उन्नतिदायक सिद्ध हुनेछ। धेरै प्रभावशाली देशमा सरकारभन्दा विपक्ष बलियो हुनेछ। जगल्लग्नमा शनि र मंगलको षडाष्टकले विश्वमा युद्धोन्माद गतिविधिले चर्चा पाउनेछ। नेपालको नाम राशिबाट धनस्थानमा साढेसाती भएकाले खर्च वृद्धि कायमै रहनेछ। वर्षको आरम्भमा गुरुको शुभ भ्रमणले बौद्धिक वर्ग र राजनेताको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ।
(खनाल दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
मुख्यमन्त्री कार्यालयको छड्केमा, यातायातका २१ कर्मचारी अनुपस्थित भेटिए २०७५ चैत्र ३०, शनिबार १०:०६
आधा घण्टामै वगर वन्यो वन– बगरमा १५ हजार बिरुवा रोपियो २०७५ चैत्र ३०, शनिबार १०:०६
हरेक वर्षजस्तै यसवर्ष पनि प्रहरीको आश्वासनमै वित्यो,नौ वर्षसम्म पनि भेटिएनन् सञ्चारउद्यमी हेमराजका हत्यारा २०७५ चैत्र ३०, शनिबार १०:०६